jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mowqifkeeda ku aadan xaalada magaalada baidoa. « AYAAMO TV
jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mowqifkeeda ku aadan xaalada magaalada baidoa.
521 Views Date March 25th, 2014 time 6:02 am
Dowlada federaalka Soomaaliyeed way ka warqabta xaalada magaaladda Baidoa waxayna laleedahay xiriir joogta ah dhinayada kala duwan. Ayagoo taa ka doonaya waxay kulan deg deg ah isugu yimid madaxda sare ee dowladda waxayna soo saareen go’aanadan:
1.Waxaa la siinaaya digniin dhamaan labada dhinac oo iska soo horjeeda in ay ku dhaqaaqan ficil gacan ku hadal ama dagaal isla markaana xasilooni dari siyaasadeed oo ku aadan Goboladdaas. Kooxdii ama qofkii lagu hello in uu mas’uul ka yahay ficil amni dari ah waxaa lala tiigsanayaa sharciga.
2.Dowlada Federalka Soomaaliya waxay amar ku siisay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed iyo xoogaga AMISON inay si deg deg ah u qaadaan talaabooyin muhiim ah oo ay ku hubinayaan abniga iyo kala danbaynta Gobolka isla markaasna uga hortagaayaan ficilkasta oo lagu wax yeelaynaayo shacabka Soomaaliyeed.
3.Dowlada Federaalka Soomaaliyeed waxay go’aansatay in ay qabato shir hordhac ah oo ay ka soo qaybgalayaan dhamaan siyaasiyinta iyo uqaasha deegaanka. Shirkaasi wuxuu noqonaaya mid dowlada hogaamiso oo lagu dhiso maamul ku meelgaar ah oo ay yeeshaan BAAY, BAKOOL iyo SHABBEELADA HOOSE. Ra’iisul Wasaaraha Dowlada Federaalka Soomaaliyeed asagoo taagyeero ka haysta godoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu abaabuli doona hoggaamin doona shirkaas
4.Dowlada Federaalka Soomaaliyeed waxay soo dhowayneysaa una mahadnaqaysaa taagyeerada iyo wada shaqaynta caalamka ku aadan qabashada shirkan muhiimka ah.
Warqadaan waxay kasoo baxdey xafiiska Ra’iisul wasaaraha soomaaliya
waxaana ku saxiixan Ra’iisul wasaaraha
waxaanu ka helney Ilo wareedkeena Madaxtooyada Ku Leenahay